အဆိုတော်ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သားဖြစ်သူအဆိုတော်အီတိုးတို့အဖွဲ့ကို အကြမ်း ဖက်မှုမှာ ပါဝင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ သတင်း……. – Shwe Naung
အဆိုတော်ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သားဖြစ်သူအဆိုတော်အီတိုးတို့အဖွဲ့ကို အကြမ်း ဖက်မှုမှာ ပါဝင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ သတင်း…….
N N | September 11, 2021 | Celebrity | No Comments
အဆိုတော် အီတိုးကို အကြမ်း ဖက်မှုများတွင် ပါဝင်သည် ဟုဆိုကာ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ၎င်းနေထိုင်သည့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းက ၈ မိုင်ရှိ ခြံဝန်းတွင် ဖမ်းဆီးခံ ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း နီးစပ်သူ များထံမှ သိရသည်။
အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်၏ သားဖြစ်သူ အဆိုတော် အီတိုးကို ၈ မိုင်ခြံတွင် ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက် ၉ မိုင်ရှိ ခြံဝန်းတစ် ခု အတွင်းက အီတိုးနှင့်ဆက်စပ်သူ လူငယ် များကိုလည်း ဖမ်းဆီး သွားကြောင်း နီးစပ်သူများက ဆိုသည်။v
အဆိုတော် အီတိုးရဲ့ မိသားစု ဝင်တဦးက “အသက်အရွယ်တခု ရောက်လာကြ ပြီဆိုတော့ တော်ရုံဆို သိပ်မတုန် လှုပ်ဘဲ ခံနိုင်ရည် ရှိလာပြီလို့ ထင်ထားခဲ့ကြတာ။
အခုနှစ် ပိုင်းတွေမှာ စိတ်ညစ်စရာ ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ များလွန်းလို့ ဒီထက်တော့ ပိုမဆိုး နိုင်တော့ဘူး လို့လည်း ထင်ထားခဲ့ကြတာ။
ဒီတကွက်ကတော့ အားလုံး အရှိုက်ကို ထိတယ်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး အန္တရာယ်ကင်းပါစေ”လို့ ပြောထားပါတယ်။
နီးစပ်သူ တစ်ဦးကလည်း “ အဆိုတော် အီတိုးတို့အဖွဲ့ကို အကြမ်း ဖက်မှုမှာ ပါဝင်တာ ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းဆီး သွားတာလို့ ကြားရတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်နက် တွေနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခြံဝန်း အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူ တွေ အားလုံးကို ခေါ်သွားတာ။
၉ မိုင်ခြံဝန်းကို မနက် ၄ နာရီမှာ ရောက်လာပြီးတော့ ခြံဝန်းထဲက လူတွေကို ခေါ်သွားတာ အခုထိ ဖမ်းထားတာ အဆက် အသွယ် မရသေးဘူး”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီး ခံရသူများမှာ အနည်းဆုံး လူ ၅ ဦးခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။အီတိုးနှင့် နီးစပ်သူ အသိုင်းအဝိုင်း၏ ပြောကြား ချက်များအရ အီတိုးကို ရေကြည်အိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုတော် အီတိုးဖမ်းဆီးခံ ရမှုအပေါ် အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဘေးကင်းကင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးလွ တ်မြောက်ဖို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းဆု တောင်းလျက် ရှိပါတယ်။
နန်းမွေစံ ရဲ့ အကြမ်းစား TIKTOK (ဗီဒီယို)
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ……..
ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ဖြစ်သွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် အပေါ် သုံးသပ်ပြလိုက်တဲ့ လက်ဝှေ့ ဖိုးသော်